कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारमा बस्ने नैतिकता गुमाएको बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीको समेत संलग्नता स्पष्ट भएकाले अब राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।
शनिबार बाँकेको कम्दीमा सुशील कोइरालाको स्मृतिमा कांग्रेसले आयोजना गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर उद्घाटन गर्दै डा. कोइरालाले सरकार भ्रष्टाचार र अनियमिततामा डुबेकोे बताए । ‘सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणपछि प्रधानमन्त्रीले सरकारमा बस्ने नैतिकता गुमाइसक्नुभयो,’ डा. कोइरालाले भने, ‘अब प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ ।’
त्यस्तै, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पनि सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मिलेर कांग्रेस नेतालाई फसाएको उनको आरोप थियो । ‘सरकार र अख्तियारबीचको मिलेमतो कांग्रेसलाई स्वीकार्य छैन, यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ,’ डा. कोइरालाले भने ।